January 19, 2018 - TV Annapurna
January 19, 2018 January 19, 2018 TV-Annapurna
गौशालाको व्यस्त सडक छेउमा बेवारिसे अवस्थामा फोहोरको पोकोभित्र बालिका भेटिएकी छन । गौशाला स्तुपा छेउमा शुक्रबार बिहानै पलाष्टिकको पोकोभित्र बेरिएको अवस्थामा २ देखी ३ महिनाका बालिका भेटिएकी हुन । गौशला प्रहरीका अनुसार पैदलयात्रीले रोईरहेको आवाज सुनेपछि खोतलेर हेर्दा प्लाष्टिकमा पोको पारेको अवस्थामा बालिका भेटिएकी हुन । बिहान ७ बजेको कठयाङ्निे जाडोमा शरिरमा कुनै बस्त्र नभएको अवस्थामा भेटिएकी बालिकालाई प्रहरीले तत्काल काठमाण्डौ मेडिकल कलेजमा उपचार गराएपछि अहिले शिशु स्याहार केन्द्रको जिम्मा लगाएको छ । शिशुलाई वेवारिसे अवस्थामा फाल्नेको खोजि भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो समय अवैध गर्भधारणका कारण यसरी…
वैज्ञानिकहरूले किशोरावस्थाको अवधि बढ्दै गएको र अब त्यो १० देखि २४ वर्षसम्म रहन थालेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारका नीति र कानूनलाई समयानूकुल बनाउन किशोरावस्थाको परिभाषामा परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले पोषणमा आएको सुधारका कारण किशोरावस्था शुरू हुने उमेर अझ कम भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । २० वर्षको उमेरपछि पनि मस्तिष्कको विकासक्रम जारी रहेकाले किशोरावस्थाको अधिकतम उमेर सीमा पनि बदलिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । किशोरावस्था कहिले शुरू हुन्छ? हाइपोथालामस भनिने मस्तिष्कको एउटा हिस्साले मानिसको पियुस र यौन ग्रन्थीहरूलाई क्रियाशील बनाउन हर्मोनहरू उत्पादन गर्न थालेपछि किशोरावस्था शुरु हुने…
भारतको उत्तर प्रदेशमा आफ्नै आँगनमा हजुरबुवासँग खेलिरहेको आठ वर्षीय बालक अकस्मात प्रहरीको गोलीले मारिएको समाचारले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यो घटना बुधबार दिउँसोको हो । आफ्नो हजुरबुवासँग खेलिरहेको उक्त बालकलाई अकस्मात गोली लागेको बताइएको छ । उत्तर प्रदेशको मथुरा गाँउमा प्रहरी गएको भए पनि प्रहरी घटनास्थलबाट निकै टाढा रहेको रहेको तर गोली कसरी त्यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने बारेमा भने सबैलाई आश्चर्य लागेको छ । ‘बच्चालाई गोली लागेको छ, उसलाई अस्पताल पनि नपुर्‍याउँदै निधन भएको छ, प्रहरी गाँउमा गस्तीमा गएको भए पनि घटना भएको समयमा प्रहरी निकै पर रहेकोले प्रहरीकै गोली…
भारतले विभिन्न वाहानामा नेपालको भुमि मिच्दा पनी पनि नेपाल सरकार किन चुप बसेको भन्दै युवाहरुको एक समुहले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । भारतले वीरगंजस्थित नेपाल–भारत सीमामा पर्ने छपकैयामा ५० विगाहा जमिन भारतीय पक्षले मिचेको भन्दै सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा प्रर्दशन गरिएको छ । नेपालीहरुको नाममा रहेको करीब ५० बिघा जमिन भारत तर्फ पर्ने गरी नयाँ सिमा स्तम्भ गाडीएको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता अभियानले शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो । सीमा क्षेत्रको विषयमा वकालत गर्दै आएको ग्रेटर नेपालले शुक्रबार मिनभवनस्थित नापी विभागमा पुगेर नेपालको सीमा भारतले मिच्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै…
काठमाडौं । ब्राजिलियन फुटबल लेजेन्ड पेले आफ्नै घरमा लडेर घाईते भएका छन । विहिबार विहान आफ्नै घरको लञ्जमा लडेर खुट्टामा चोट लागेका पेलेलाइ्र्र उपचारका लागी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । ७७ वर्षिय पेलेका अन्य अंगहरुमा समेत असर गरेको आशंकामा चिकित्सकले उनको शरिरका विभिन्न भागको परिक्षण गरेको छन । फुटबल राइटर्स एशोसिएसनले बेलायतमा सम्मान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारीमा रहेका पेले घाईतेभएपछि यो कार्यक्रमसमेत स्थगित गर्ने तयारी छ । यद्यपी पेले र उनको टिमले भने कार्यक्रम नरोक्न आग्रह गरेको एफडब्लूएले जनाएको छ ।
भक्तपुरमा ३ नं. नम्बर प्रदेशको राजधानी माग गर्दै आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवम् स्थानीय विकास तथा संघिय मामिला मन्त्री कमल थापा र नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको तस्विरमा कालोमोसो दलेका छन् । शुक्रबार दिउसों मध्यपुर थिमी बाह्खा बजारमा आन्दोलनकारीहरुले तीन नेताको तस्बिरमा कालोमोसो दली आगो लगाई बिरोध जनाएका छन् । प्राविधिक कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन लत्याउँदैं प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकेको भन्दैं भक्तपुरका स्थानीयले बिरोध जनाउँदै आन्दोलन गरेका छन् । सबै पूर्वाधारका दृष्टिकोणले ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी भक्तपुर उपयुक्त हुने कार्यदलको प्रतिवेदन लत्याउँदै अन्य सबै जिल्लालाई अपायक…
इण्डोनेसियाली प्रहरी इन्काउण्टरमा नेपाली नागरिक शरण कुमार तामाङ मारिएका छन् । नेपाली दुतावासका द्धितीय सचीव प्रेमराज गौतमका अनुसार मृतक तामाङ सेम्जोङ ७, धादिङका बासिन्दा हुन् । इण्डोनेसियाको जकार्तास्थित होटल अल्पलाइनमा बसेर लागूऔषध धन्दा चलाउँदै आएका तामाङलाई ग्राहक बनेर त्यहाँ पुगेको प्रहरीले जनवरी १२ मा पक्रेको थियो। उनलाई पक्राउ गरि थप अनुसन्धानका लागि लग्दैगर्दा जकार्तास्थित आइटिसी चम्पाका अपार्टमेन्ट अगाडी बाटोमा प्रहरीमाथी हतियार खोसेर प्रहार गर्न खोजेपछि प्रहरी इन्काउण्टरमै उनी मारिएको बताइएको छ। एकहप्ताअघि भएको घटनामा मारिएका शरण कुमारबारे मलेसियास्थित नेपाली दुतावासले त्यहाँस्थित अवैतनिक बाणिज्यदुतलाई बुझ्न भनेको थियो। वाणिज्य दुतमार्फत प्राप्त जानकारीपछि मृतक ३४…
झडपहुँदा दर्जन प्रदर्शनकारी र ५ प्रहरी घाइते डोटीको जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा शुक्रबार प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै आएका आन्दोलनकारी र प्रहरीका बीचमा झडप भएको छ । झडपका क्रममा एक दर्जन आन्दोलनकारी र ५ जना प्रहरी घाइते भएका छन । झडपमा एमाले डोटीका अध्यक्ष चक्रबहादुर मल्ल, दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मेयर मञ्जु मलासी, सायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिस्ना सिंह, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जर्नादन जोशी, आन्दोलनकारी सुशील घर्ती, शेरबहादुर मल्ल, मेरिना श्रेष्ठ, विजयराज ओझासहितका एक दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । झडपमा प्रहरी निरीक्षक भिमदत्त जोशीसहित ५ जना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय…
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । बैंककमा स्वास्थ्य उपचार गरेर फर्किएका ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए । दुई नेताबीच झण्डै ३ घन्टा छलफल भएको प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई अध्यक्षले राष्ट्रियसभा गठनबारे कार्यदलल दिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरेका छन् र आवश्यक परेमा सामान्य हेरफेर गरेर अन्तिम रुप दिने सहमाति भएको छ । प्रदेश सरकार गठन र पार्टी एकताबारे पनि छलफल भएको छ । पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन भोलि दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुने र माघ…
काठमाडौँ । आन्तरिकरुपमा उडान गरिरहेका आठ हेलिकप्टर कम्पनीले रु ५४ लाख २३ हजार ६५१ रकम तिर्न अटेर गरेका छन् । आन्तरिकतर्फ उडान गरिरहेका कूल १८ वायु सेवा कम्पनीमध्ये आठ वटा हेलिकप्टर कम्पनीले सेवा पु-याइरहेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उड्डयन कार्यालयका अनुसार आठ हेलिकप्टर कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन नमानेका हुन् । उड्डयन कार्यालयका अनुसार श्री एयर, सिम्रिक एयरको समान १८ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ । श्री एयरको रु १८ लाख ९९ हजार ५७८ बाँकी छ । सिम्रिक एयरको रु १८ लाख २९ हजार ७४३ रकम…